यी चार राशी भएका युवतिहरुले पुरुषलाई छिट्टै आकर्षित गर्ने गर्छन ! – Life Nepali
यी चार राशी भएका युवतिहरुले पुरुषलाई छिट्टै आकर्षित गर्ने गर्छन !
व्यक्तिको जीवनमा निकै प्र’भाव पारेको हुन्छ । राशी अनुसार व्यक्तिको स्वभाव चरित्र र भविष्यलाई सजिलै नियाल्न सक्ने ज्योतिष शास्त्रले बताएको छ । त्यस्तै कतिपय राशी भएका व्यक्तिहरु यस्तो हुन्छन् जसमा अन्य मानिसलाई सजिलै आर्कषण गर्न सक्ने शक्ति दिएको हुन्छ । त्यसैले आज हामी त्यस्तै शक्ति भएका केही राशीको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । जुन राशी भएका युवतीहरुले पुरुषहरुलाई सजिलै मो’हित पारेका हुन्छन् । हेरौँ कुन कुन हुन् ती राशीहरु ।
१.वृश्चिक राशी : यो राशी भएका युवतीहरुसँग जो कोही पुरुषहरु मोहित हुने गर्छन् । उनीहरुको आँखामा भएको एक सम्मोहन क्षमताको कारण उनीहरुले जो कोहीलाई मोहीत बनाउने गर्छ ।
२.मीन राशी : यस राशी भएका युवतीहरु निकै रोमान्टिक हुने गर्छन् । अधिकांस पुरुषहरु यो राशी भएका महिलाहरुसँग सजिलै माया जा’लमा फस्ने गर्छन् । उनीहरुमा मिठो कुरा गरेर पुरुषलाई आफ्नो बसमा पानै सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ ।
३.मिथुन राशी : यो राशीका युवतीहरुलाई अप्सरासँग तुलना गरिन्छ । उनीहरुले जस्तोसुकै पुरुषलाई पनि आर्कषित पार्ने गर्छन् । सुन्दरता नभएपनि यो राशी भएका युवतीहरुले पुरुषहरुलाई आफ्नो का’बूमा राख्न सक्ने क्षमता भएको हुन्छ । उनीहरुमा बुढ्यौली हुँदा सम्म पनि जवान देखिने गर्छ ।
४.वृष राशी : बृष राशीका युवतीहरुलाई सुन्दर देवीसँग तुलना गरिएको छ । उनीहरुसँग अरु व्यक्तिमा आफ्नो अधिकार कायमा राख्न सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ । उनीहरुले पुरुषलाई छिट्टै मन पराउँछन् ।
Previous युवति बसिन युवकको घर बाहिरै धर्ना ! भन्छिन बिहे नगर्दासम्म धर्ना जारी गर्छु –
Next यी पुरुषले पानीले १० फिट भरिएको ठाउँवाट दुई शिशुलाई यसरी बचाए ( भिडियो भाइरल )